Haaluma qoodama gosa keessa duraan tureetu Sirna Gadaa keessattiis ga-dhaabbate jechuudha.
Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe. Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira. Gosa keessaa Qaalluun bahuu dandayuufi hin dandeenye jiru. Nabii — Kan abbootiiti. Ilmaan kormaatu kormaatu keessa daddabran yoo tahellee, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma.
Boorna keessatti — Kuusa jedhama. Dhugaan isaa garuu sirna amantiis, ofkeessaa qabaachuudha. Gujii keessatti- Suluda jedhamu. Click here to sign up.
Sirna Gadaa keessattiis ummanni Oromoo aadaa walii galatti bifa armaan olii qabaatu akka qabu, aadaa kanarraahiis qaroomni ummata Oromoo kalandara mataa isaa qabaachutti akka geesse hubanna. Gositi hangafni yeroo warra kaan qaceechu, geggeessu warri quxxusuun isaan jalati walitti qabamu.
Kanaaf, sadarkaa qabu; warri gad hafan isaa gaditti dalagu jechuudha. Manguddoota lammii keessaa ammoo, kan warra hangafaa hunda dursu.
Inniniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa tahuun nimala. Dalagaan isaanii warra Gadooman gorsuu, qacheelchuu, maandhaa isaanii kan tahan gorsuu, leenjisuufi barsiisuudha.
Inniniis waaqa jedhamee yaamama. Akkaataan polotikaa sirnichaas uunkaa jireenyya hawaasa Oromootti hidhamee jira. Jiruu dhufataa deemuudhaan yeroo itti ofdandayutti tarkaanfataniidha. Walumaagalatti aadaan ormoo akkaataa dinagdeefi polotikaa sirna tokkoo, akkaataa dhalli namaa ittiin naannoo isaa hubatee jijjiiru tahuu olitti ilaalleera.
Filmaata qondaaloota Gaddfi marii biyyaarratti argamuudhaan gargaaru.
Aadaa kanaa ala bahuun, badii isa sadarkaa oliitti waan fudhatamuuf, namuu aadaa tahuu isaa waan beekuuf sirna Gadaa keessa jiru kabajee osoo keessaa hinbaasin kabajee jiraata. Sadarkaan Gadaa kun bakkayyuu waan jiruuf walitti qabatti Dabballoota jechuun hin badu.
Yeroo itti warri Gadaan isaanii geessee biyya bulchan, seera ilaalan, dubbii Gosaa furaniidha. Gosoota Oromoo keessaa Booranni hangafa. Galaawudoos humna Habasha gurmeesse ofirraa ittise.
Kun Goggeessa Gadaa ykn miseensa jedhamee waamama. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Bara Muudana kana seera jajjabaa lama tumatan.
Yaada kanaaf deebisaa kenni Cancel reply. Hojiin isaaniis akka qeesotafii sheekootaati. Akka mangoddoonni Booranaa himanitti Gadaa jaaruuf yaalii dheeraan eega godhame booda, Gadaan yeroo dheeraaf bifa hojechuu dandayu dhaabbate. Yeroo isaan itti naannoo Baaleefii Saidaamoorraa sossohanii hamma Wallootti qubatan waan beekamuumiti.
Guyyootii jiraniif maqaa 27tu jira. Tuulam keessatti ayyaana dhagaa iktaaba jaarraa d. Doorama Bakka heddutti sadarkaa itti aangoo qabachuudhaaf ilmaan kormaa qophii barbaachisaa godhaniidha.
Enter the email address you oromooo up with and we’ll email you a reset link. Goggeessa Gadaa Miseensaa fi Marsaa Gadaa b.
Mootummooleen habashaa darban Oromoo cabsuuf jecha meeshaalee waraanaa, ogeessotaafi loltoota waliin biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa kadhachuun Oromoo irratti duulaa akka turan seenaan hinhaalle. Gujii keessatti ayyaana bantii haaddachuu Kanneenii alattiis, cidhni gargaraa yeroo beekamootti bakka bakkatti godhamu, amantiiniis qaama aadaa hawaasichaa waan ooromoo, ayyaanni amantii sirna Gadaa calaqqisan bakka hundatti godhamaa ture.
Inniniis kan mitaaba argachuuti. Sadarkaa gossaattiis hariiroon kun ittifufa. Haalli kun akkamitti ture? Isaaniis warraa akka a. Haa tahu malee Birmajiin gara dhuma Gadaa isaati jala Gojjaam keessatti moohame.